Soo dejisan UltraISO 9.6.5.3237 – Vessoft
Soo dejisan UltraISO
UltraISO – software ah oo awood leh in ay la shaqeeyaan images. Software wuxuu taageeraa qaabab image caan ah oo badan, sida: ISO, IMG, CIF, QASHIN, NRG iwm Sifooyinka ugu weyn ee UltraISO ka mid ah abuuritaanka, editing, kaas oo ama takhalusid xogta image. Software wuxuu ka kooban yahay qaybo ka mid ah ISO-image-dhismeedka ayna si loo badbaadiyo of space disk. UltraISO u saamaxaaya in la abuuro saxannada kabaha iyo Buur image faylasha in saxannada la taaban karin.
Abuur, edit, beddelid xogta image
Create gudbiyayaal xogta ugu duubtid
Ayna ka mid ah qaab-dhismeedka ISO-image
UltraISO Software la xiriira:
Saxannada qalab The awood leh in ay la images disk shaqeeyaan. software The kuu ogolaanayaa inaad inuu Abuuro wax saxannada Downlaods iyo drives flash si loo soo dajiyo nidaamka qalliinka.
العربية, English, Українська, Français... Defraggler 2.21.993
العربية, English, Українська, Français... Wise Disk Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... jDownloader 0.9.581 iyo 2 beta
العربية, English, Українська, Français... Sweet Home 3D 5.1
English, Français, Español, Deutsch... doPDF 8.7.943